XOG: Ugaas Xasan oo wada Qorshe halis ku ah musharaxnimada Xasan Sheikh.. – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
XOG: Ugaas Xasan oo wada Qorshe halis ku ah musharaxnimada Xasan Sheikh..
Ugaaska Beesha Xawaadle Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo ku sugan magaalada Baladweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan ayaa wada qorshe Xasan Sheikh kaga cuna qabateynayo Xildhibaanada Hiiraan uga mataleysa Baarlamaanka Dowladda Soo socota.
Ugaas Xasan ayaa kulan magaalada Baladweyne kula yeeshay qabaa’ilada kala duwan ee Gobolka Hiiraan dega,isagoo kala hadlay arimo ay ka mid yihiin masiirka Hiiraan iyo waliba sida ay u arkaan arimaha doorashada ee hada socda.
Ilo ku dhow Ugaaska ayaa sheegaya in wali Ugaas Xasan Ugaas Khaliif uusan la dhacsaneyn siday wax u socdaan,islamarkaana uu dhaliilsan waxa dalka ka socda wax walibana la sameeyay ogaal la’aantiisa.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in Ugaas Odayaasha Beelaha Gobolka Hiiraan ka dhaadhiciyay iney dhegta wax ugu sheegaan xubnaha iyagu matalaya ee ku jira Baarlamaanka si mar kale aysan u soo dooran Xasan Sheikh.
Sidoo kale,Ugaaska ayaa hada qorsheynaya in Xildhibaanada Beesha Xawaadle matelaya isugu yeero Baladweyne,islamarkaana uu ka dhaadhiciyo qorshe ah ineysan dooran Xasan Sheikh kana horyimaadaan damaciisa dib u soo laabashada.
Xildhibaanada Beesha Xawaadle ku metalaya Dowladda dhexe ee soo socota oo kooban ayaa intooda badan loo xaglinayaa iney u badan yihiin Xasan Sheikh,kuwaasi oo markii hore rabitaankiisa kursiga ku yimid.
Ilaa iyo hada Xildhibaanada Beesha Xawaadle ee Xasan Sheikh ka horjeeda waxaa ugu dun weyn C/llaahi Goodax Barre oo dhawaan ku soo baxay doorasho ka dhacday Jowhar.
Previous: Sawirro Xasaasi-Madaxweyne Gaas iyo RW Cumar oo kulan gaar ah laqaatay barlamaanka kasoo jeeda…
Next: Dhacdo naxdin & La Yaab noqotay oo Muqdisho si aad ah looga hadal hayo..